News - Sidee loo doortaa saliida lagama maarmaanka ah?
Sida loo dooro saliid muhiim ah?
Saliidaha lagama maarmaanka ah waa dhadhan saafi ah oo laga soosaaray miraha, maqaarka, laamaha, caleemaha ama ubaxa dhirta. Waxaa loo isticmaalaa udugga si kor loogu qaado niyadda iyo caafimaadka jirka. Saliidaha lagama maarmaanka ah waxaa lagu marin karaa jirka biyo ama saliid sidayaal saliid ah, waxaa lagu neefsan karaa kuwa wax faafiya, ama waxaa lagu daraa waxyaabo kale oo lagu buufiyo Sii wad akhriska oo baro sida loo isticmaalo saliidaha lagama maarmaanka ah.
Dooro saliid muhiim ah
1. Tixgeli tayada saliidaha lagama maarmaanka ah intaadan iibsan. Maaddaama aad u isticmaali doontid saliid muhiim ah jirkaaga iyo gurigaaga, dantaada ayaa ugu wanaagsan inaad doorato saliidaha lagama maarmaanka ah oo tayo sare leh. Ma jiro heer tayo oo dhammaan shirkadaha shidaalka ay tahay inay raacaan, markaa waa inaad tixgelisaa waxyaabo yar ka hor intaadan iibsan.
Miyaad ka maqashay shirkadda ama horay uma isticmaalin wax soo saarkooda? Kaliya ka iibso saliida lagama maarmaanka ah shirkadaha sumcad leh.
Qiimaha saliida lagama maarmaanka ahi miyay aad uga jaban tahay ta alaabada kale ee la midka ah? Ka taxaddar saliidaha lagama maarmaanka ah ee jaban maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaysan nadiif ahayn.
Ma magaca Latinka ama waddanka asalka ah ee geedka sameysay saliidda muhiimka ah ee ku qoran dhalada? Faahfaahintani waxay muujineysaa in shirkaddu u adeegto macaamiisha aqoonta leh sidaas darteedna ay tahay mid aad loogu kalsoon yahay.
Ma jiraan wax sharraxaad ah oo daahir ah oo ku saabsan baakadka? Raadi alaabada leh 100% saliida lagama maarmaanka ah iskana ilaali alaabooyinka boqolkiiba ka yar ama aan lahayn.
Sidee sheygu uriyaa Haddii alaabtu u urin sidaad filayso, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn wax soo saar tayo sare leh.
Ma jiraa wax sharraxaad ah oo ku saabsan beero dabiici ah ama "duurjoogta" baakadka? Haddii kale, dhirta loo isticmaali jiray saliidda waxaa laga yaabaa inay soo saartay iyo / ama lagu buufiyay sunta cayayaanka ee tiro badan, marka waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso
2. Tixgeli nooca kiimikada ee saliida lagama maarmaanka ah intaadan iibsan ka hor. Qaar ka mid ah soo saarayaasha saliida waxay bixiyaan noocyo isku mid ah saliidaha. Saamaynta cimilada, carrada, deegaanka iyo qodobo kale awgood, urta noocyadan kala duwan ama noocyada kiimikada ayaa waxyar kala duwan. Faa'iidada xulashada nooc kiimiko gaar ah oo saliid muhiim ah ayaa ah inaad adigu astaysto qalabka wax lagu shubo.
3. Tixgeli baakadaha. Saamaynta saliidaha lagama maarmaanka ah ee nalka iyo kuleylka ayaa yaraada oo dhaqso u milma. Hubso in badeecada aad soo iibsaneysaa ay ku jiraan weel quraarad ah oo mugdi ah (badanaa bunni) si fiicanna loo xiray Iska ilaali inaad iibsato saliidaha lagama maarmaanka ah ee la furay ama u muuqda inay soo gaareen qorraxda ama kuleylka.